Mkpu: Kacha rụọ ọrụ nke ọma Mobile App Development Platform | Martech Zone
Nke a bụ otu n'ime isiokwu ndị ahụ enwere m ezigbo ịhụnanya siri ike n'ihe gbasara ndị ahịa m. Ngwa ngwa ngwa nwere ike ịbụ otu n'ime atụmatụ ndị ahụ na-aga n'ihu ịnwe ụgwọ kachasị elu na nkwụghachi ala kachasị na ntinye ego mgbe emechara nke ọma. Ma mgbe emechara nke ọma, ọ nwere nnabata dị elu na njikọ aka.
Kwa ụbọchị, a na-ebugo ngwa 100 banyere ahịa, nke pasent 35 na-emetụta ahịa. Ya mere, idebe ngwa ngwa odida na 65 percent. Ọ bụ nnukwu ọrụ maka ndị mmepe na ndị ahịa taa iwulite ma bido ngwa nwere ike ịba ọgaranya na ahịa ahụ. Ọganiihu mmeri nke ngwa dị na pesenti 0.01, nke pụtara na ọghọm ọdịda dị oke elu.
Ihe Mere Ngwa Ngwa Mobile Na-adabaghị Ime Mmetụta
Gịnị Na-eme Egwu Ngwa Ngwa Ngwa?
Must ga-etinyerịrị ahụmịhe nke onye ọrụ gị nke kachasị elu karịa ahụmịhe weebụ gị n'iji ngwaọrụ ndị ejikọtara na ngwaọrụ mkpanaka - site na ọdịyo, accelerometer, ọnọdụ, igwefoto na / ma ọ bụ nchekwa.
Ga enwerịrị ahụmịhe onye ọrụ dị ịtụnanya nke karịrị mfe. Ọtụtụ nhọrọ ma ọ bụ mgbagwoju anya na ndị mmadụ ga-ewepụ ya. Nke a na-ewe ihe ịtụnanya ọrụ ahụmahụ otu imezu.
Must ghaghị ịdị gara gara ma na-anabata ọsọ nke ọkụ iji zaghachi ihe ndị ị chọrọ ma gaa n'ihu na-emeziwanye ngwa ahụ - n'ihu ndị ahịa gị na ndị asọmpi gị. Ọ bụrụ na ịnọghị, ị ga-atụfu. Ọtụtụ mgbe, M na-ele ụlọ ọrụ ịfụ ha dum mobile ngwa mmepe mmefu ego na a mbụ version na-egosi nkwa promise ma na e nweghị ego na-ebuli na hapụ emana.
Ọ bụrụ na nke ahụ siri ike ma dịkwa oke ọnụ - ọ bụ. Ma, e nwere ihe ọzọ - ewu gị mobile ngwa na a mobile ngwa na-ewu ụlọ nke a nwalere, kachasị maka ahụmịhe onye ọrụ, ma nwee ike ịtụ nha nke nhọrọ niile ịchọrọ. Ihe dị iche iche ọnụ ahịa na-esite na iri puku kwuru iri puku wee ruo ọtụtụ narị dollar kwa ọnwa - na obere chinchi na nkenye ngwa ngwa.
Ọ bụghị na ngwa ọdịnala na-adịghị tinye n'ọrụ. N'ezie, ngwa downloads na-buru amụma na iru 260 nde site 2022! N’agbata Machị na Mee 2019, n’agbata 35,000 na ngwa 42,000 kwa ọnwa agbakwunyere Applọ Ahịa iOS. Na esemokwu bụ na e nwere ọtụtụ ngwa ndị dị abaghị uru - na mmefu ego gwụgo ma ụlọ ọrụ enweghị ike izute ndị ahịa ma ọ bụ azụmaahịa na-achọ n'oge.
Nke a bụ ihe mere mobile ngwa na-ewu ụlọ bụ usoro ndị ọzọ a ma ama maka ọtụtụ azụmaahịa iji zipụ ahụmịhe na-enweghị atụ na-agaghị agbaji ma ọ bụ tinye aka n'ihe egwu. Ndị na-ewu ngwa mkpanaka dị ịtụnanya na ibugharị ihu na atụmatụ nwere ike iji ngwa ngwa were ngwaọrụ ngwa ngwa na-enweghị nnukwu ụgwọ.
Ma mgbe ị na-ewu interface dị elu nke ndị ahịa gị ma ọ bụ atụmanya gị nakweere, ugbu a ị nwere ike ijide ozi ha, hazie ahụmịhe ahụ, ma soro ha kwurịta okwu site na ngwaọrụ mkpanaka ha - na-agafe arụmọrụ niile nke mgbasa ozi na ndị ọzọ na-ajụ ase.
Mkpu: Mepụta Ahụkebe Ngwa - Ngwa ngwa!
Mkpu malitere dị ka ngwá ọrụ maka ịmepụta obodo microblogging na 2008. Site na ịrị elu nke smartphones, isi ụlọ ọrụ gbadoro anya na ngwa ekwentị. Na ọgbọ nke ise nke Shoutem ngwa na-ewu ụlọ, dabere na Gbanwee nwa, ikpo okwu na-enye ndị ọrụ ohere ịmepụta ngwa ọdịnala na ngwa igwe eji arụ ọrụ obe.
Ikpo okwu na-enye gburugburu ebe mmepe na ngwa ọrụ zuru oke, yana nnwere onwe ịgbanwe ọrụ ọ bụla nke ikpo okwu ma ọ bụ mepụta nke ọhụrụ. A na-emeghe ọrụ niile ka ị gaghị ekpochi, na-enye gị ohere ilekwasị anya na ịmepụta isi nke ngwa gị.
Mepụta Ngwa Ngwa
Nwere ike iji ikpo okwu dịka onye na-ewu ngwa Mee N'onwe Gị, iji mepụta ngwa na-enweghị otu akara nke koodu, ebe ha ewuworị ọtụtụ arụmọrụ ị ga-atụ anya na ngwa, na-eche ka ị tinye ha na ngwa gị.
Akaụntụ Akaụntụ - Mepụta ngwa maka ndị ahịa na obere oge. Kwalite ọrụ ndị ahịa site na iji akara ngosi CMS maka ngwa mkpanaka, ma ọ bụ mmepe atụmatụ njirimara nke otu gị.
Chepụta ma rụọ ọrụ - wuru n'elu React Native, na-akwado n'ezie nwa afọ iOS na gam akporo interface na arụmọrụ.
Ahịa Mgbatị - Gbasaa atụmatụ, arụmọrụ, njikọta, yana isiokwu yana ihe mgbakwunye 40.
Development - Mmepe mmepe zuru oke na ikpo okwu dabere na React Native. Jiri ma gbanwee mgbakwunye mkpu ma ọ bụ, wulite nke gị.
monetization - Shoutem na-akwado ọrụ mgbasa ozi niile. Nwere ike izipu ozi ịkwanye akpaaka na ndepụta.
mmezi - Shoutem na-ewepu ụgwọ ọnwa dị elu maka sava, tinye CMS, dashboard, ịkwanye ọkwa, nyocha, yana mmelite iOS & Android.
Shoutem Wuru-Na Tydị ihuenyo
Banyere - Gosi ihe omuma banyere ngwa gi ma obu ahia gi
Analytics - Mgbatị nchịkọta Shoutem na-akọwa interface n'ụdị nke ezigara mmebi nke enwere ike iji soro ihe omume Shoutem. Jiri middleware iji gbochie omume nchịkọta wee soro ihe omume.
Akwụkwọ - Gosi akwukwo na ndi ode akwukwo
CMS - Shoutem CMS ndọtị
Koodụ koodu - Na-enye CodePush nkwado maka mmelite koodu ikuku
Ihe - Gosi ihe na ọnọdụ na oge
favorites - Extensions na-eji Shoutem ọkacha mmasị ọkacha mmasị na-enwe ike na-echekwa na weghachite ihe na-eji ngwa ọrụ ka e debere na obodo ngwa nchekwa.
Firebase - Mgbatị maka ịhazi njikọta na Firebase maka izipu ọkwa nkwụsị, nchekwa, wdg.
Google Analytics - Kwado Google Analytics
Okirikiri ala - Shoutem Layout ndọtị
Main navigation - App-larịị igodo
navigation - Na-egosi sub-igodo maka nested ihuenyo
News - Gosi akụkọ akụkọ
ndị mmadụ - Gosi ndị mmadụ na kọntaktị nkọwa
Photos - Gosi ihe osise foto
Ebe - Gosi ihe nwere ọnọdụ
ngwaahịa - Gosi ngwaahịa na njikọ nzụta
Ushma ọkwa - Base ndọtị maka push pushma Ọkwa
Radio - Gbanye ebe redio
Menulọ oriri na ọurantụurantụ menu - Gosi menu ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ
RSS - Shoutem RSS ndọtị
Akụkọ RSS - Gosi akụkọ sitere na faili RSS
Vidiyo RSS - Gosi ihe ngosi vidiyo site na faili RSS
isiokwu - Edozi ma chekwaa isiokwu metụtara isiokwu
Nyocha njirimara - Gosi onye ọrụ profaịlụ, pụọ onye ọrụ
Videos - Gosi ihe ngosi vidiyo
Vimeo vidiyo - Gosi vimeo vidiyo vidiyo
Nlele weebụ - Gosi web peeji n’ime ngwa ma obu ihe nchọgharị
Na vidiyo Youtube - Gosi ihe ngosi vidio nke Youtube
ngosi: Martech Zone bụ mmekọ mmekọ nke Mkpu.
Tags: androidapụl ngwaCMSngwa mkpanaaka ngwaebe mgbabaGoogle Analyticsngwa ngwa googlemenu ngwamobile ngwa nyochagburugburu mobile ngwamobile push mobilema Ọkwaozi ngwa-emeeme nwa afọrss mobile ngwatie mkpuYouTube mobile ngwa
Otu esi edozi nnweta vs. Mgbalị Ndabere